दशैं र अबोध फ़ुच्चे | मझेरी डट कम
दशैं र अबोध फ़ुच्चे
छक्कु उदासी — Thu, 10/14/2010 - 07:32
दशैं आउँने बेलाको मौसम साँच्चीकै रमाईलो हुन्छ । भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालमा दशैं मान्नकै लागि प्रकृतिले सबै कुरा जुराई दिएको हो कि जस्तो लाग्छ । तर.... तर.... त्यहींका धेरै जसो जनताका लागि प्रत्यक बर्ष दशैं, दशैं हैन दशा बन्ने गरेको छ ।
फुच्चे ! पोहर, परारतिर त सानै भएकोले हामी गरिब छौ भन्ने थाहा पनि थिएन र उस्लाई के दशैं, के तिहार मतलब पनि थिएन । आमाको बाबुले अटम भर्दै आएको फुच्चेले यो पालीदेखि आमालाई कल्पनै नगरेका प्रश्नहरू एक पछि अर्को गर्दै सोध्न थालेको छ । पुच्चेले अरु सबै सोधे पनि हाम्रो बाबा खोई ? भनेर नसोधे हुँदो हो भन्ने उसको आमालाई ठूलो जलतराश थियो अर्थात चिन्ता लागिरहेको थियो ।
सुख र खुसी कुन चराको नाम हो ? भन्ने थाहा नै नभएको फुच्चेकी आमाले दशैं र तिहार त झन मान्नै बिर्सेकी थिई । बिहान के खाउँ, बेलुकी के खाउँ भईरहने फुच्चेकी आमा साहुहरूको खेतबारीमा काम नजुरेको दिन त व्रत बसेर दिन काट्दै आएकी थिई । अब त छोरोलाई पनि त्यो गुन्युको भोटो सानो हुदै आएको थियो । फुच्चेलाई गतिलो कमिज र जाँघेको जोह गर्न नपाउँदै दशैं नजिकिएको मार फुच्चेकी आमालाई पर्नु परेको थियो ।
फुच्चे गर्भमा छ भन्ने थाहै नपाई बिदेश लागेका दिलको मालिक आज सम्म अत्तो पत्तो छैन । बेजातीसँग बिहे गरिस भनेर न माईतीले हेरे, न घरकाले स्वीकारे । न घरकी न घाटकी भएको बेला झन गाउँबाटै निकाला गरियो । गाउँ-गाउँतिर डुल्दै जाँदा गाई भैसीको शरणमा एउटा साहुको गोठमा ओट लागेकी थिई । एकातिर भुँडीमा पापको डल्लो हुर्कदै थियो । छोरी जन्मियोस भन्ने कामना गर्दा गदै दुर्भाग्य बस भैंसी गोठमा छोरोको जन्म भयो । न्वारन नै नभएको छोरोको नाम वरपरका सबैले ए...फुच्चे भनेर बोलाउन थाले । आफू पनि छाती माथी ढुंगा राखी आफ्नो मुटुमा फलेको छोरालाई फुच्चे भनेर बोलाउन बाध्य हुन्थी ।
अब त फुच्चेले पनि दशैंको बेला अरुको आमाले घर, आगन र चौका सिंगार पटार गरेको देख्न थाल्यो । अरुको बाबाले "भ्या....भ्या ..." गर्दै खसी ल्याएको पनि सुन्यो । अनि त्यस्तै अरुको बाबा बिदेशबाट बाकस टल्काउदै चरप्पै चाचा, पापा ल्याएको बुझ्यो । उसका सबै दौंतारीहरूले नयाँ-नयाँ लुगा लगाएको र मिठा-मिठा खाएको महसुस गर्न थाल्यो । त्यसैले होला अरुको लैलैमा फुच्चे पनि अन्यासै खुसी हुँदै थियो । अवश्य फुच्चेको अबोध मानस्पातलभरि अरुको घरमा जस्तै आफ्नो घरमा पनि धुमधामका साथ दशै भित्रिने आशा गरेको थियो । तर फुच्चेको आशा निराशामा परिणत हुँदै थियो । ऊ आमालाई प्रश्नमाथि प्रश्न थुपार्दै थियो । गर्दा गर्दा उस्का अबोध धेरै जिज्ञासाहरू उस्को आमाको मौन र अमिलो अनुहार अनि बलिनधारा आँशुसँगै नाजवाफमै टुङ्गिन बाध्य भएको थियो । बिचरा ! अबोध फुच्चेको के दोष ????
जि चिधिम्ह मचा "चिनाखँ"
साहित्यको हरियाली राजधानी बन्दै राजविराज
भाइटिका नचुन भो चेली
निसन्देह प्रेम बज्रपात
मैले तिमीलाई माया गर्नुको कारण के होला ?
उन्को मेरो बिचमा दिवार कुल घरान जात थियो
धरोधर्म बा !
शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध
शीत घाटीमा लालीगुरासको
दाहालले हो सपारेको
हेर्न लाउनु (मुक्तक)
नाम राख्छौँ नामी
हिजोसम्म त्यस्तो थियो
अमेरिकामा मालती मङ्गलेका नायक प्राज्ञ हरिबहादुर थापा सम्मानित
घर एउटा कविता